Xubinta Koboca Dhaqaale ee dalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Xubinta Koboca Dhaqaale ee dalka
Xubinta Koboca Dhaqaale ee dalka
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu kobco 2.9% sannadkan, laga bilaabo 2.8% sanadkii hore, ka hor inta uusan kobaca dhaqso u dhicin 3.2-3.5% xilliga dhexdhexaadka, Bangiga Adduunka ayaa sheegay Isniintii.
Somaliya oo dhacda Geeska Afrika ayaa waxaa ka jira jahwareer ilaa 1991, markii beelo hubeysan ay xukunka ka tuureen Madaxweyne Siyaad Barre ka dibna dhinacba midka kale isu rogeen. Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa ku dhacay macaluul iyo weeraro argagaxiso oo ay geystaan ​​kooxda xagjirka ah ee al-Qaacida la leh ee al-Shabaab.
Saadaasha kobaca sareysa ee sedexda ama shanta sano ee soo socota waxay ku xirnaan doontaa in dalka uu awoodo sii wadida isbadalkiisa dhaqaale ee hadda, Bangiga Aduunka ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay.
Cashuur uruurinta ay dowladdu sameysay ayaa kordhay 29% sanadkii hore, maadaama dhaqaaluhu kasoo kabtay abaar sanadkii hore isla markaana dowlada ay badasho siyaasadeeda canshuureed, Bangiga Aduunka ayaa yiri.
“In kasta oo horumarkan uu yahay mid dhiirrigelin leh, haddana maaliyadda ku harsan ee weli jirta kuma filna in lagu haqabtiro baahiyaha (xaga) waxbarashada iyo waaxaha caafimaadka,” ayuu yiri bangigu.
Waxay weydiisatay dowladda inay sameysato sanduuq loogu talagalay waxbarashada si loogu oggolaado maamulayaasha Muqdisho inay abaabulaan lacag ka badan gobollada gobolka iyo Maamulada kale ee taageera waxbarashada.
Bishii Maajo, Hay’adda Lacagta Adduunka ayaa sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socday wadada saxda ah laakiin wuxuu ka digay inay wali u nugulshahay amniga, isbedelka cimilada iyo saboolnimada.